Labo waa Ila Ceeb wayna Ila Cuslaadeen ( Adigoo Qof U Socda Ha Weerarin Dalkaaga iyo Calankaaga)!!!!! – Hornafrik Media Network
Cudurdaar, inta aanan u gudbin waxa iga guuxaya, waxaan cadaynayaa in aysan qusayn kuna socon Cid gaar ah, waxaan kaloo cadaynayaa in ay tahay aragtidayda Shaqsiga ah kuna matalin masuuliyad Ka baxsan Shaqsiyadayda.
Qofkasta oo Soomaali ahoow, ogoow in ay jiraan wax Naga dhaxeeya oo ay tahay in aan wada difaacano si kasta oo aan Kula duwanahay.
Calanka, Ciidda, Qaranka, iyo kuwo badan oo la mid ah waa astaamaha jiritaankeenna, horumarkooda iyo Sumcadoodaba waan wada leenahay, dib-udhacooda iyo Ceebahooduna waa Nabarro nagu wada suntan.
Waxaan Erayadaan doortay in aan idinla wadaago:-
Kadib markaan Maalmo badan oo wali lagu jiro arkayay, ama maqlayay Qof raba in uu mucaarado Qofkale oo haya Mansab Qaran, balse nuxurka Sheekadiisu udhadhamayso in uu magac dilo Dalkiisa,Ciidda ama Calanka.
Umadaha Dunidu kuma wada socdaan rabitaankooda, balse waxeey uturayaan Dalkooda, Una aqbalaan waxbadan oo aanay jeclayn, haddii ay huriwayaan in ay aragtidooda cabiraanna Uma dhigaan si Qarannimadooda wax yeelaysa.
Su’aalo igu wareegaya.
Tusaale, faafinta waxkasta oo muujinaya horumarka Dalku, soow maaha wax aan wadaagno cidkasta ha keentee? hadaba maxaa diidaya in aan buunbuunino maadaama aan wada leenahay cidkasta Libinta ha lahaatee?
Tusaale kale, fal kasta oo waxyeelaya Magaca Soomaaliya, soow maaha mid nawada taabanaysa cid kasta masuul haka ahaatee? hadaba soow maaha in aan kawada damqano kana wada hortagno cidkasta ha gaysatee?
Maxaa Ila Ceeb ah ?
Waa marka aan arko Qof Soomaali ah oo aan jeclaysan Maqalka ama araga sheekooyinkaan soo socda oo kale, isagoo u arka in Qof ama koox ay si uun isku diidanyihiin fuliyay isna uusan jeclayn Libinta Lidkiisa!!
Bal Isha Mari intaan iyo kuwa la midka ah yaanay Dani ugu jirin oo inaga mid ah?
Waddo Qurxoon oo la dhisay, Garoon Diyaaradeed oo casri ah, Xulka Qaranka oo guul gaaray, Dhaqaalaha Magaalo heblo oo kobcay, Soomaaliya oo Urur Caalami ah Ku biirtay, warbixin Ammaantay Soomaaliya, Xarun dunsanayd Labaatan Sano oo dib loo dhisay iyo qaar kaloo badan???
Dhinaca kale Ka istaag Sheekada hadana, isla Qofka dhibsada maqalka Akhbaaraadka kore, kana aamusa amaba inkara, wuxuu jecelyahay kuwaan!!!
Qarax dhacay, Qilaaf cusub, Soomaaliya oo lagu bahdilay fagaare Caalami ah, Warbixin eedaysay Soomaaliya, Xiisad laga cabsiqabo meel heblo, waa lagu fashilmay, Goob dhisnayd oo burburtay, Waddo laxiray, iyo Qaar kale oo badan????
Sidaan qaybta hore ee Qormadaan Ku sheegay, haka fiirin labada tusaale Cidda samaysay ee Ka masuul ah eed iyo Ammaan midna ee Ka eeg maxeey uga dhigantahay Soomaaliya Guud ahaan, adoo intaas Maanka Ku haya doorkaaga qaado, Una dhig si aan adiga Naftaada iyo Dalkaaga a udarnayn, waa hadaad aragti kale Ka qabto, Eed ama Ammaan muujin middii ay doonto ha ahaatee.
Waxaa laga yaabaa in Dadbadani marka ay aqriyaan Qormadayda ii arkikaraan in aan diidanahay Dhaliisha ama doonayo taageero kaliya, Walaalayaal, Uma jeedo sidaas, waxaan aqbalsanahay waliba jeclahay in xaqiiqda miiska lakeeno, waxaan diidanahay in latalaxtago oo adoo Qof ujeeda aad dhaawacayso Qarannimada Ka dibna dhamaanteen oo adiga Qoray ama fuliyay Ku jirto dhibane u noqono wax aan Ka maarmikarno.
Talo Walaalnimo inta garashadayda ah.
Hadaba walaal, Geedka aad harsanayso ha gooyn adoo Qoraxda ladoonaya Nin Kula harsanaya, Gabbaadka aad dugsanaysana ha gubin adoo Dhaxanta ladoonaya Nin Kula dugsanaya oo gacantaada ha eersan.
(Cawska Jiilaal waa lama huraan)
intaan Asiibay Allaah ayay Ka ahaatay, intaan qaldayna Naftayda iyo Shaydaan ayay Ka ahaadeen, Cafis ayaan ku waydiistay yaa Allaah.
W.Q: Cabdiraxmaan Yusuf Cadaala
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Warfaafinta.
Shirweynaha Qaran Ee Dib U Eegista Dastuurka Oo Dib U Dhac Ku Yimid.